Haweeney uurkeeda kireysata oo markay ilmihii tobnaad dhashay sheegtay inay dhalmada joojineyso(Daawo sawirada)
Jill Hawkins oo ah hooyada dhashay 10 carruur ah kuna nool wadankaBritainayaa toddobaadkan sheegtay inay ka nasaneyso shaqadeeda carruur u dhalida qoysaska kale kadib markii sida ay sheegtay xannuuno ay la soo darseen.
Wargeyska Daily Mail ee wadanka Ingiriiska ka soo baxa ayaa ka soo xigtay Jill Hawkins in ay dooneyso inay gasho shaqo ka fariisi dhanka dhalmada ah maadaama ay dareemeyso xannuun isla markaana ay ka daashay dhalmada badan.
Jill Hawkins oo 47 jir ah waxay dhowaan dhashay labo wiil oo mataane ah oo ay u dhashay qoys ilme la’aan iyadoo qalliin ku dhashay siddeed usbuuc ka hor. Waxayna sheegtay in labadaasi wiil ee mataanaha ah yihiin kuwa ugu dambeeya ee ay dhasho.
Labada ilme ee mataanaha ah ayaa waxaa iska lahaa 42 jir macalin ka ah dugsiyada sare ee wadankaBritainiyo xaaskiisa oo 40 jir ah. Labada lamaanaha ah waxay toddoba sano ka hor dhaleen hal gabar oo si caadi ah ku dhalatay laakiin wixii mudadaasi ka dambeeya ma aysan dhalin ilme kale taasina waxay keentay inay u baahdaan inay kireystaan haweeneydan kale ee u dhashay mataanaha.
Jill Hawkins oo ah haweeneyda la kireystay oo hadda ilmihii tobnaad kiro dad kale ugu dhashay ayaa sheegeysa in xaalada ay ku adkaatyay oo aysan sii wadi Karin ganacsiga ilme dhalida.
“Waxaa la gaaray xilligii ay haweenka kale shaqadaan igala wareegi lahaayeen shaqadaan. Ma doonayo inaan khatar geliyo nolosha carruurta iyo sidoo kale nolosheyda.
Mrs Hawkins ayaa intaa ku dartay inay khatar gashay nolosheeda intii ay ku jirtay uurkii ugu dambeeyay kadib markii ay si aad ah u dhiigbaxday kadibna loola cararay isbitaalka.
Shaqada uur ka kireysiga ee ay ku jirtay Jill Hawkins ayay soo waday mudo 20 sano ah, waxayna sidan ku dhashay 10 carruur ah oo dhamaantood aysan iyada lahayn dad kalana ay ka qaateen.
Waxay heshaa £12,000 halkii ilme oo ay dhasho.
Dhakhaatiirta wadamada reer Galbeedka ayaa badanaa lamaanayaasha isqaba kula taliya inay kireystaan haween u dhala kadib marka ay la deristo xaalado caafimaad oo aan saamaxaeyn inay si saani ah u dhalaan qoysaskaasi.
“Inkastoo aan rag la haasaawo haddana waligey wax ma jeclaan mana guursan” ayey tiri.
“Sababta uur kireysiga keentay waa iyadoo aysan jirin haween fara badan oo raba inay ilme dhalaan.” Ayey sii raacisay.
Mrs Hawklins waxay haweenka kale ee Ingiriiska u sheegtay inay ka fiirsadaan shaqada noocan oo kale ah.